Cloud Storage ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်တာလဲ?
Cloud Storage ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်သလဲ?
12 Oct 2018 . 8:13 PM
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ မိသားစု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နဲ့သက်ဆိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာ Physical Storage တွေဖြစ်တဲ့ CD ၊ DVD တွေအပြင် Computer ၊ Memory Stick နဲ့ Hard Disk Drive တွေပေါ်မှာ အဆင့်မြင့်မြင့်သိမ်းဆည်းလာကြပါပြီ။ အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ ထိန်းသိမ်းရတဲ့ အချက်အလက်တွေပိုများပြားလာသလို မမြဲတဲ့သင်္ခါရသဘောအရ ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာ ကြိုပြီးမခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ တန်ဖိုးကြီးလွန်းတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်ဒေတာတွေဟာ ဒီလိုဥပမာမျိုးတွေနဲ့ အများဆုံးဆုံးရှုံးရလေ့ရှိပါတယ်။
မျက်စိရှေ့မှာ Data များပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း
လူတိုင်းနီးပါး ဟာ ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးလာကြပြီဆိုတော့ Memory Stick ဆိုတာကလည်း အထူးတလည်ပြောပြစရာမလိုတဲ့ အိပ်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ နဲ့ ရုံးခန်းတွေမှာ အလုပ်လုပ်မယ်၊ အစည်းအဝေးနဲ့ဟောပြောပွဲမှာ Projector နဲ့ပြဖို့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Stick နဲ့ဆောင်ထားမယ် ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့် Data တွေကို Stick ထဲထည့်သုံးနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခန့်မသင့်လို့ Virus ကိုက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ သွားထိုးပြီးသုံးမိတဲ့အခါ ကံကောင်းရင် Files တွေ Auto Hidden လောက်သာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကံမကောင်းရင်တော့ Files တွေဟာ Unknown Format တွေဖြစ်ပြီး ပြန်ယူဖို့မလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးအချက်အလက်တွေလည်းဆုံးရှုံးမှာဖြစ်သလို တစ်ဖက်က အလုပ်မှာလည်းမျက်နှာပျက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထက်ဖြစ်နိုင်တာကတော့ အရည်အသွေးမကောင်းတဲ့ USB Stick တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း ရှိသင့်တဲ့သက်တမ်းတစ်ခုထက် ပိုပြီးမြန်မြန်ပျက်သွားတာမျိုးကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာတင် အချိန်တိုအတွင်း ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ Data တွေအကြောင်းပါ။
အမှတ်တမဲ့ကြောင့် Data များပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်း
ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးက ကျနော်တို့ပိုပြီးကြုံရလေ့ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကားစီးရင်း ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတဲ့အထဲပါသွားတာမျိုး၊ အင်္ကျီအိပ်ကပ်၊ ဘောင်းဘီအိပ်ကပ်တွေထဲမှာ ထည့်ထားပြီး အဝတ်လျှော်တဲ့အခါရေဝင်လို့ပျက်သွားတာမျိုး၊ နေရာအထားမှားပြီးပျောက်တာနဲ့ သွားရင်းလာရင်း သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးကျပျောက်သွားတာမျိုးတွေပေါ့။
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးဖြစ်ရပ်တွေက ခဏခဏ ကြုံတွေ့နေကြားနေရတဲ့အကြောင်းတွေပါ။ ကွန်ပျူတာထဲထည့်ထားပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် OS ပျက်သွားတဲ့အခါ အလွယ်တစ်ကူပြန်ယူလို့မရနိုင်သလို Hard Disk Drive ဆိုတာလည်း Memory Stick အကြီးစားပဲဖြစ်တာမို့ သိပ်မထူးခြားပါဘူး။ Storage များများဝင်ဆံ့ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ Memory Stick တွေထက်တောင်ပိုပြီးအပျက်မြန်နေတတ်ပါသေးတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေမကြာမကြာဖြစ်နေရင်တော့ မဟန်ပါဘူး၊ ရေရှည်မှာ အဲ့လိုမဖြစ်အောင်နည်းလမ်းတစ်ခုခုတော့ ရှာဖို့လိုလာပါပြီ။ ထိတွေ့လို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ (Hardware) တွေက ပျက်စီးလွယ်တယ်ဆိုရင် ထိတွေ့လို့မရတဲ့ Software Program တွေကိုအသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ Online Storage Cloud Drive တွေက အချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Online Storage Cloud Drive ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။
Cloud Storage ဆိုတာဘာလဲ?
သင့်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ သင်က A သူငယ်ချင်းက B လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ။
A က Digital Data တွေဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင် နဲ့သီချင်းတွေ စတဲ့အချက်အလက်တွေကို စိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ သိမ်းထားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်မရွေး အဲ့ဒေတာတွေကို ပြန်ကြည့်နိုင်မယ်၊ ကူးယူနိုင်မယ်၊ ပြင်ဆင်နိုင်မယ် စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Memory Stick တစ်ချောင်းမှာထည့်ပြီး ရောက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပေမယ့် ပျက်သွားမှာ၊ ကျပျောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ B ကတော့ အိမ်မှာအနေများတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Network ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးပါ။ သူကတော့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ Hard Disk Drive တစ်ခုကို ၂၄ နာရီလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပြီး အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်အောင် အင်တာနက်နဲ့ပါ ကွန်ယက်ချိတ်ထားပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ အလွယ်တစ်ကူ ဝင်ရောက်နိုင်မယ့် Software Program ကိုပါစိတ်ကြိုက်ရေးသားထားပြီး UI ပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ ပြင်ဆင်မွန်းမံထားတဲ့ Hard Disk Drive ဟာ နေရာလွတ်တွေအများကြီးကျန်နေပြီးသူ့အတွက် လိုတာထက်ပိုနေတာကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ A ကို ၄င်းရဲ့ Data တွေလာရောက်သိမ်းဆည်းဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ အဲ့လိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ A အတွက် သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Storage အပိုင်းတစ်ခု ခွဲပြီးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာရှိတဲ့ လွတ်နေတဲ့ Storage တွေထဲက ၃ပုံ ၁ပုံကိုခွဲပေးလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် A ရဲ့ Storage လိုအပ်မှုက B ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက် ပိုများလာတဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် Hard Disk Drive တစ်လုံးကိုတိုးချဲ့ပြီး A စီက အခကြေးငွေကောက်ခံကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတော့တယ်။ A စီကနေ လစဉ်ကြေး၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်စဉ်ကြေးကောက်ခံပြီး B ဟာ သူ့ရဲ့ Storage Space တွေကိုပိုပြီးကောင်းမွန်စိတ်ချရအောင် ထိန်းသိမ်းကာ တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုပါ လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချပါတော့တယ်။
Google Drive ရဲ့ Data အချက်အလက်တွေသိမ်းဆည်းရာ Data Center တစ်ခု
ဒီနေရာမှာ A ကတော့ ကျနော်တို့လို အသုံးပြုသူ Customer တွေဖြစ်ပြီး B ကတော့ A ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Cloud Service တွေဖြစ်ပါတယ်။ Cloud Service တွေဟာ စိတ်ချလုံခြုံတဲ့ အဆောက်အဦးတွေဆောက်လုပ်ပြီး အချိန်ပြည့် အအေးဓာတ်နဲ့ အင်တာနက် စနစ်တွေပေးထားကာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Network Engineer တွေနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အချက်အလက်တွေသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာလည်း တစ်နေရာတည်းစု ပြုံသိမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ Backup Plan အဆင့်ဆင့်ပွားထားပြီးသိမ်းထားပေးတာကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးဖို့ရာခိုင်နှုန်းဟာ မရှိသလောက်ကို စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ Cloud Storage တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်သဘောပေါက်လာပြီလို့ယူဆပါတယ်။ ဒါဆို Cloud Storage ရဲ့
အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ ပြန်ကြည့်ရအောင်။
Cloud Storage တွေတော်တော်များများဟာ Window နဲ့ Mac OS တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် သီးသန့် Software တွေကိုထုတ်ပေးသလို Web-Based UI တွေကိုလည်းအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်သိမ်းချင်တဲ့ Folder နဲ့ File တွေ Mouse နဲ့အလွယ်တကူဆွဲထည့်ရုံပါပဲ။ ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ Internal Storage တွေနဲ့အတူ Cloud Storage ကိုပါတစ်ပါတည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ File တစ်ခုကို Share ဖို့အတွက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ခါစီ Upload လုပ်ပေးနေရင် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ Drive မှာ Upload လုပ်ပြီးရလာတဲ့ Link နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို Share ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်လည်းသက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်သာရှိနေမယ်ဆိုရင် သင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက် Cloud Drive ထဲအလွယ်တစ်ခုဝင်ရောက်ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။
ဒီအချက်ကတော့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ ပညာရှင်တွေအတွက် ၄င်းတို့ရဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို သိမ်းထားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Data တွေကိုသိမ်းဆည်းမယ့် Cloud Storage တွေဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒါဏ်တွေအတွက် အဆင့်ဆင့်စီမံတွက်ချက်ပြီးတည်ဆောက်ထားတာကြောင့် ကိုယ့်စီမှာပုံမှန်သိမ်းထားတာထက်စာရင် အများကြီးစိတ်ချရပါတယ်။
Cloud Drive တွေ (အထူးသဖြင့် Google Drive) ဟာ လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးနဲ့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရသလို စိတ်ချရမှုနဲ့ ပေးရတဲ့တန်ဖိုး ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အတော်ကိုသက်သာတဲ့ အနေအထားမှာရှိပါတယ်။ Google Drive ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် 100 GB နဲ့ တစ်လကို မြန်မာငွေ ၃ထောင်ပဲကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ( ဒေါ်လာဈေးပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်)
အခမဲ့(သို့) အခကြေးငွေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး Cloud Storage Service များ
Dropbox မှာ Data တွေသိမ်းဆည်းဖို့အတွက် အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် 2GB အခမဲ့ပေးပါတယ်။ Mobile App တွေလည်းထုတ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ ဖုန်းပေါ်က Data တွေသူငယ်ချင်းကို Share ပေးဖို့အတွက် Download လုပ်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Download ပြုလုပ်ရမယ့် UI ကလည်းရိုးရှင်းပါတယ်။
ဒါကတော့ Dropbox မှာရရှိနိုင်တဲ့ Storage Plans တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
OneDrive ကတော့ Microsoft ကပိုင်ဆိုင်ပြီး Window Computer တွေမှာ Data Backup လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ User တစ်ယောက်စီတိုင်းအတွက် Drive Storage 5GB အခမဲ့ပေးထားသလို ထပ်ပြီးပိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ Package တွေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဦးမှာပါ။ Mobile App လည်းရှိပေမယ့် Window OS အတွက်ဦးစားပေးထားတာကြောင့် အသုံးပြုလို့ရတဲ့နယ်ပယ်သိပ်ပြီးမတွင်ကျယ်သလိုရှိပါတယ်။
သူကတော့ Cloud Drive တွေထဲမှာ Free အများဆုံးပေးနိုင်တဲ့ Cloud Storage Provider တစ်ခုပါ။ Free အနေနဲ့ 50GB ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Bandwidth ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် File Size ကြီးကြီးတွေ Download ဆွဲရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ Download လုပ်တဲ့အခါမှာ Internet Download Manager လို Downloader Software တွေနဲ့ဆွဲလို့မရပါဘူး။ MEGA ကထုတ်ပေးထားတဲ့ Software ကဆွဲတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Browser ကနေ တိုက်ရိုက်ဆွဲတာ မျိုးပဲလုပ်လို့ရပါတယ်။ MEGA ကိုတော့ ရေရှည်အသုံးပြုရမယ့်Files တွေအတွက် အဓိကထားပြီးသုံးကြပါတယ်။
PCloud ကတော့ Dropbox နဲ့နည်းနည်းဆင်တူပါတယ်။ Smartphone User တွေလက်ထက်မှာပိုအသုံးများလာပါတယ်။ Download ဆွဲရတာလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး Data တွေသိမ်းဆည်းမျှဝေဖို့ Free အနေနဲ့ 20 GB ပေးထားပါတယ်။
MediaFire Cloud Storage
ဒီ ကောင်လေးကတော့ကျနော်တို့အချစ်တော်လေးဆိုရင်လည်းမမှားဘူးထင်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင် Bar လေးပေါ်မှာ Download ပြုလုပ်ရမယ့် Size လေးကိုဖော်ပြပေးထားပြီး Download Bandwidth ကလည်းအကန့်အသတ်မရှိ ခွင့်ပြုပေးထားတာကြောင့် လိုင်းကောင်းရင်ကောင်းသလို အမုန်းဆွဲလို့ရပါတယ်။ Data တွေသိမ်းဆည်းမျှဝေဖို့အတွက် Cloud Storage 10GB ကိုလည်း အခမဲ့ပေးထားပါသေးတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရ Personal Data တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းသုံးအချက်အလက်တွေကို သိမ်းဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ Google Drive ဟာရွေးချယ်ဖို့အသင့်ဆုံး Cloud Storage ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google Drive ကို Google အကောင့်တစ်ခု
ရှိတာနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Google အကောင့်ဆိုတာ ဖွင့်ရအလွယ်ဆုံး၊ အပေါဆုံးနဲ့ လူတိုင်းအားလုံးနီးပါးရှိနေတဲ့ အကောင့်တစ်ကောင့်ပါ။ Google အကောင့်တစ်ခုရှိတာနဲ့ Cloud Storage 15GB တစ်သက်တာ အခမဲ့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
၂.တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Software များပေါများခြင်း
GDrive ဟာ လူသုံးအများဆုံး Internet Search Engine ကြီးဖြစ်တဲ့ Google ရဲ့ Service ခွဲတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တခြား Software Plugin တွေကလည်းများပြားလှပါတယ်။ Google Chrome Extension အနေနဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ့် Program တွေကိုတော့ ဒီနေရာကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၃.မည်သည့် File အမျိုးအစားကိုမဆိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း
Google Drive မှာ Digital Data တွေကို စိတ်တိုင်းကျသိမ်းဆည်းလို့ရပါသေးတယ်။
၄.Gmail ကတဆင့်အလွယ်တစ်ကူ Share နိုင်ခြင်း
GDrive ထဲမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို Gmail ကတစ်ဆင့် အလွယ်တစ်ကူ Share နိုင်တစ်လို တစ်ယောက်ခြင်းစီအတွက်လည်း Permission သီးသန့်ထားပေးလို့ရပါသေးတယ်။
နေရာမတူတဲ့ Co-Worker တွေနဲ့ Project တွေတွဲဖက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ Document နဲ့ Folder တွေ File တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
Internet ကိုအသုံးပြုပြီး Data တွေ သိမ်းတဲ့အခါ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုလည်း မဖြစ်မနေသတိပြုရမှာပါ။ Google ကတော့ User တွေရဲ့အကောင့်တွေကို အမြင့်ဆုံး လုံခြုံရေးနည်းပညာတွေအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတာကြောင့် Google Account အခိုးမခံရသ၍တော့ Drive ပေါ်က Data တွေအားလုံးလုံခြုံနေဦးမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Drive ထဲမှာရှိတဲ့ Data တွေအတွက်လည်း Online Antivirus Scanner တွေထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။
၇. စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ UI ကိုပံ့ပိုးပေးထားခြင်း
Android ပဲဖြစ်ဖြစ် iOS ပဲဖြစ်ဖြစ် Google Drive App ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ အတော်လေးလွယ်ကူရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သာမန် File Manager တစ်ခုသုံးနေရသလိုခံစားရတဲ့အထိ ရိုးရှင်းပါတယ်။
၈.File Data များအလွယ်တစ်ကူပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခြင်း
Google Drive မှာ လိုအပ်တဲ့ File တွေကို ပြန်လည်ရှာဖွေဖို့အတွက် Search Bar ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။ တစ်လအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကိုလည်းပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၉.Music Streaming အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
အကယ်၍ GDrive မှာသီချင်းလေးတွေတင်ထားမယ်ဆိုရင် Driveplayer.com ကနေတစ်ဆင့် ပြန်လည်နားထောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ Android ဖုန်းအတွက်လည်း CloudPlayer App နဲ့ကိုယ်ပိုင် Music Streaming တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ (CloudPlayer မှာ Drive Music Streaming ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Premium App ကို $7 နဲ့ဝယ်ယူရမှာပါ)
Google Drive ကပေးတဲ့ 15GB ကိုအသုံးပြုရတာမလောက်တော့ဘူးဆိုရင် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ Upgrade လုပ်နိုင်တယ်။ လစဉ်ကြေး နှစ်စဉ်ကြေး Plan ၂မျိုးရွေးချယ်နိုင်ပြီး Upgrade လုပ်နိုင်မယ့် Storage တွေကတော့ 100 GB ၊ 1 TB ၊ 10 TB ၊ 20 TB နဲ့ 30 TB အထိရွေးယူနိုင်ပါတယ်။ Storage Upgrade လုပ်ဖို့အတွက်တော့ Visa Card နဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီး ပြထားတဲ့အဆင့်တွေအတိုင်း အလွယ်တစ်ကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူမှုအစီအစဉ် ပြီးဆုံးသွားရင်တော့ အကောင့်ထဲ ကို အခုလို Receipt လေးပေးလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Plan ကို Unscribe မလုပ်သေးသ၍တော့ လစဉ်အလိုလျောက် ကျသင့်ငွေကိုဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ Google Drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Storage Plan ကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Cloud Drive တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အားသာချက်တွေကိုသိရှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Physical Storage တွေအစား ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ Cloud Storage တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ သိပြီးအသုံးပြုနေတဲ့ Cloud Storage ကောင်းတာလေးတွေရှိရင်လည်း ဝေမျှဆွေးနွှေးပေးသွားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ နောင်အလျဉ်းသင့်တဲ့ အခါ Cloud Storage Type တွေအကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။
Cloud Storage ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကွောငျ့အသုံးပွုသငျ့တာလဲ?
ဒီနခေ့တျေမှာ ကနြျောတို့ရဲ့ မိသားစု၊ ကိုယျရေးကိုယျတာ နဲ့သကျဆိုငျတာ ဒါမှမဟုတျ အလုပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အရေးကွီးအခကျြအလကျတှကေိုသိမျးဆညျးတဲ့အခါမှာ Physical Storage တှဖွေဈတဲ့ CD ၊ DVD တှအေပွငျ Computer ၊ Memory Stick နဲ့ Hard Disk Drive တှပေျေါမှာ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့သိမျးဆညျးလာကွပါပွီ။ အခြိနျကာလကွာမွငျ့လာတာနဲ့အမြှ ထိနျးသိမျးရတဲ့ အခကျြအလကျတှပေိုမြားပွားလာသလို မမွဲတဲ့သင်ျခါရသဘောအရ ပစ်စညျးတဈခုဟာ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ ပြောကျဆုံးပကျြစီးသှားမလဲဆိုတာ ကွိုပွီးမခနျ့မှနျးနိုငျပါဘူး။ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ တနျဖိုးကွီးလှနျးတဲ့ ကနြျောတို့ရဲ့ အခကျြအလကျဒတောတှဟော ဒီလိုဥပမာမြိုးတှနေဲ့ အမြားဆုံးဆုံးရှုံးရလရှေိ့ပါတယျ။
မကျြစိရှမှေ့ာ Data မြားပကျြစီးဆုံးရှုံးခွငျး
လူတိုငျးနီးပါး ဟာ ကှနျပြူတာ၊ စမတျဖုနျးတှနေဲ့ ရငျးနှီးလာကွပွီဆိုတော့ Memory Stick ဆိုတာကလညျး အထူးတလညျပွောပွစရာမလိုတဲ့ အိပျဆောငျပစ်စညျးလေးတဈခုဖွဈလာမှာသခြောပါတယျ။ ကုမ်ပဏီ နဲ့ ရုံးခနျးတှမှော အလုပျလုပျမယျ၊ အစညျးအဝေးနဲ့ဟောပွောပှဲမှာ Projector နဲ့ပွဖို့အတှကျ ကိုယျ့ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို Stick နဲ့ဆောငျထားမယျ ဒီလိုအကွောငျးတှကွေောငျ့ Data တှကေို Stick ထဲထညျ့သုံးနကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခနျ့မသငျ့လို့ Virus ကိုကျနတေဲ့ ကှနျပြူတာမှာ သှားထိုးပွီးသုံးမိတဲ့အခါ ကံကောငျးရငျ Files တှေ Auto Hidden လောကျသာဖွဈနိုငျပမေယျ့ ကံမကောငျးရငျတော့ Files တှဟော Unknown Format တှဖွေဈပွီး ပွနျယူဖို့မလှယျကူတဲ့အခွအေနကေိုရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ အဲ့လိုဖွဈခဲ့ရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့အရေးကွီးအခကျြအလကျတှလေညျးဆုံးရှုံးမှာဖွဈသလို တဈဖကျက အလုပျမှာလညျးမကျြနှာပကျြစရာတှအေမြားကွီးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ နောကျထကျဖွဈနိုငျတာကတော့ အရညျအသှေးမကောငျးတဲ့ USB Stick တှအေသုံးပွုတဲ့အခါမှာလညျး ရှိသငျ့တဲ့သကျတမျးတဈခုထကျ ပိုပွီးမွနျမွနျပကျြသှားတာမြိုးကိုကွုံရနိုငျပါတယျ။ ဒါတှကေတော့ ကိုယျ့မကျြစိရှမှေ့ာတငျ အခြိနျတိုအတှငျး ဆုံးရှုံးသှားနိုငျတဲ့ ကနြျောတို့ရဲ့ Data တှအေကွောငျးပါ။
အမှတျတမဲ့ကွောငျ့ Data မြားပကျြစီးဆုံးရှုံးခွငျး
ဒီလိုဖွဈရပျမြိုးက ကနြျောတို့ပိုပွီးကွုံရလရှေိ့မယျထငျပါတယျ။ ကားစီးရငျး ခါးပိုကျနှိုကျခံရတဲ့အထဲပါသှားတာမြိုး၊ အင်ျကြီအိပျကပျ၊ ဘောငျးဘီအိပျကပျတှထေဲမှာ ထညျ့ထားပွီး အဝတျလြှျောတဲ့အခါရဝေငျလို့ပကျြသှားတာမြိုး၊ နရောအထားမှားပွီးပြောကျတာနဲ့ သှားရငျးလာရငျး သတိလကျလှတျဖွဈပွီးကပြောကျသှားတာမြိုးတှပေေါ့။
အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုမြိုးဖွဈရပျတှကေ ခဏခဏ ကွုံတှနေ့ကွေားနရေတဲ့အကွောငျးတှပေါ။ ကှနျပြူတာထဲထညျ့ထားပမေယျ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ OS ပကျြသှားတဲ့အခါ အလှယျတဈကူပွနျယူလို့မရနိုငျသလို Hard Disk Drive ဆိုတာလညျး Memory Stick အကွီးစားပဲဖွဈတာမို့ သိပျမထူးခွားပါဘူး။ Storage မြားမြားဝငျဆံ့ပမေယျ့ တဈခါတဈလမှော Memory Stick တှထေကျတောငျပိုပွီးအပကျြမွနျနတေတျပါသေးတယျ။
ဒီလိုအဖွဈဆိုးတှမေကွာမကွာဖွဈနရေငျတော့ မဟနျပါဘူး၊ ရရှေညျမှာ အဲ့လိုမဖွဈအောငျနညျးလမျးတဈခုခုတော့ ရှာဖို့လိုလာပါပွီ။ ထိတှလေို့ရတဲ့အရာဝတ်ထုတှေ (Hardware) တှကေ ပကျြစီးလှယျတယျဆိုရငျ ထိတှလေို့မရတဲ့ Software Program တှကေိုအသုံးပွုပွီးတညျဆောကျထားတဲ့ Online Storage Cloud Drive တှကေ အခကျြအလကျတှကေိုသိမျးဆညျးဖို့အကောငျးဆုံးနရောတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ ဒီနရောမှာ Online Storage Cloud Drive ဆိုတာဘာလဲ? ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲဆိုတာ အနညျးငယျရှငျးပွပေးခငျြပါတယျ။
သငျ့မှာ သူငယျခငျြးတဈယောကျရှိတယျဆိုပါစို့။ သငျက A သူငယျခငျြးက B လို့မှတျထားလိုကျပါ။
A က Digital Data တှဖွေဈတဲ့ ဓါတျပုံတှေ၊ ရုပျရှငျ နဲ့သီခငျြးတှေ စတဲ့အခကျြအလကျတှကေို စိတျခရြတဲ့နရောတဈခုမှာ သိမျးထားခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျမရှေး အဲ့ဒတောတှကေို ပွနျကွညျ့နိုငျမယျ၊ ကူးယူနိုငျမယျ၊ ပွငျဆငျနိုငျမယျ စတဲ့အခကျြတှကေိုလညျးလုပျခငျြပါတယျ။ ပုံမှနျဆိုရငျတော့ Memory Stick တဈခြောငျးမှာထညျ့ပွီး ရောကျတဲ့နရောမှာသုံးလို့ရပမေယျ့ ပကျြသှားမှာ၊ ကပြောကျသှားမှာကို စိုးရိမျတဲ့အတှကျ တခွားနညျးလမျးတဈခုကိုစဉျးစားနပေါတယျ။ B ကတော့ အိမျမှာအနမြေားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး Network ခြိတျဆကျမှုနညျးပညာကိုလညျးကြှမျးကငျြသူတဈဦးပါ။ သူကတော့ အရညျအသှေးမွငျ့မားတဲ့ Hard Disk Drive တဈခုကို ၂၄ နာရီလုံးအသုံးပွုနိုငျအောငျ ပွငျဆငျထားပွီး အခြိနျမရှေးနရောမရှေးအသုံးပွုနိုငျအောငျ အငျတာနကျနဲ့ပါ ကှနျယကျခြိတျထားပါတယျ။ ကွိုကျတဲ့နရောကနေ အလှယျတဈကူ ဝငျရောကျနိုငျမယျ့ Software Program ကိုပါစိတျကွိုကျရေးသားထားပွီး UI ပိုငျးကိုအကောငျးဆုံးပွငျဆငျထားပါတော့တယျ။ သူ့ရဲ့ ပွငျဆငျမှနျးမံထားတဲ့ Hard Disk Drive ဟာ နရောလှတျတှအေမြားကွီးကနျြနပွေီးသူ့အတှကျ လိုတာထကျပိုနတောကွောငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ A ကို ၎င်းငျးရဲ့ Data တှလောရောကျသိမျးဆညျးဖို့ကမျးလှမျးပါတယျ။ အဲ့လိုကမျးလှမျးတဲ့အခါ A အတှကျ သီးသနျ့အသုံးပွုနိုငျမယျ့ Storage အပိုငျးတဈခု ခှဲပွီးသတျမှတျပေးလိုကျပါတယျ။ သူ့မှာရှိတဲ့ လှတျနတေဲ့ Storage တှထေဲက ၃ပုံ ၁ပုံကိုခှဲပေးလိုကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ A ရဲ့ Storage လိုအပျမှုက B ပေးနိုငျတဲ့ပမာဏထကျ ပိုမြားလာတဲ့အခါမှာ နောကျထပျ Hard Disk Drive တဈလုံးကိုတိုးခြဲ့ပွီး A စီက အခကွေးငှကေောကျခံကာ ဝနျဆောငျမှုပေးပါတော့တယျ။ A စီကနေ လစဉျကွေး၊ ဒါမှမဟုတျ နှဈစဉျကွေးကောကျခံပွီး B ဟာ သူ့ရဲ့ Storage Space တှကေိုပိုပွီးကောငျးမှနျစိတျခရြအောငျ ထိနျးသိမျးကာ တခွားမိတျဆှတှေကေိုပါ လကျဆငျ့ကမျးရောငျးခပြါတော့တယျ။
Google Drive ရဲ့ Data အခကျြအလကျတှသေိမျးဆညျးရာ Data Center တဈခု
ဒီနရောမှာ A ကတော့ ကနြျောတို့လို အသုံးပွုသူ Customer တှဖွေဈပွီး B ကတော့ A ကို ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ Cloud Service တှဖွေဈပါတယျ။ Cloud Service တှဟော စိတျခလြုံခွုံတဲ့ အဆောကျအဦးတှဆေောကျလုပျပွီး အခြိနျပွညျ့ အအေးဓာတျနဲ့ အငျတာနကျ စနဈတှပေေးထားကာ ကြှမျးကငျြတဲ့ Network Engineer တှနေဲ့ ကနြျောတို့ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေိုထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ အခကျြအလကျတှသေိမျးဆညျးတဲ့အခါမှာလညျး တဈနရောတညျးစု ပွုံသိမျးတာမြိုးမဟုတျပဲ Backup Plan အဆငျ့ဆငျ့ပှားထားပွီးသိမျးထားပေးတာကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးဖို့ရာခိုငျနှုနျးဟာ မရှိသလောကျကို စိတျခရြပါတယျ။ ဒီလောကျဆိုရငျတော့ Cloud Storage တှရေဲ့အလုပျလုပျပုံကို နားလညျသဘောပေါကျလာပွီလို့ယူဆပါတယျ။ ဒါဆို Cloud Storage ရဲ့
အားသာခကျြတှကေ ဘာတှဖွေဈမလဲ ပွနျကွညျ့ရအောငျ။
Cloud Storage တှတေျောတျောမြားမြားဟာ Window နဲ့ Mac OS တှအေတှကျ အသုံးပွုနိုငျမယျ့ သီးသနျ့ Software တှကေိုထုတျပေးသလို Web-Based UI တှကေိုလညျးအရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အလှယျကူဆုံးပွငျဆငျပေးထားပါတယျ။ ကိုယျသိမျးခငျြတဲ့ Folder နဲ့ File တှေ Mouse နဲ့အလှယျတကူဆှဲထညျ့ရုံပါပဲ။ ပွီးတော့ ကှနျပြူတာမှာရှိတဲ့ Internal Storage တှနေဲ့အတူ Cloud Storage ကိုပါတဈပါတညျးတှမွေ့ငျနိုငျပါသေးတယျ။
ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ File တဈခုကို Share ဖို့အတှကျ တဈယောကျကိုတဈခါစီ Upload လုပျပေးနရေငျ အလုပျရှုပျပါတယျ။ Drive မှာ Upload လုပျပွီးရလာတဲ့ Link နဲ့ သူငယျခငျြးတှအေားလုံးကို Share ပေးနိုငျတယျဆိုရငျ အခြိနျကုနျ၊ ငှကေုနျလညျးသကျသာမှာဖွဈပါတယျ။
အငျတာနကျသာရှိနမေယျဆိုရငျ သငျဘယျနရောရောကျရောကျ Cloud Drive ထဲအလှယျတဈခုဝငျရောကျပွငျဆငျနိုငျမှာပါ။
ဒီအခကျြကတော့ လုပျငနျးရှငျတှေ၊ ပညာရှငျတှအေတှကျ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အရေးကွီးအခကျြအလကျတှကေို သိမျးထားနိုငျဖို့အကောငျးဆုံးအားသာခကျြဖွဈပါတယျ။ Data တှကေိုသိမျးဆညျးမယျ့ Cloud Storage တှဟော သဘာဝဘေးအန်တရာယျဒါဏျတှအေတှကျ အဆငျ့ဆငျ့စီမံတှကျခကျြပွီးတညျဆောကျထားတာကွောငျ့ ကိုယျ့စီမှာပုံမှနျသိမျးထားတာထကျစာရငျ အမြားကွီးစိတျခရြပါတယျ။
Cloud Drive တှေ (အထူးသဖွငျ့ Google Drive) ဟာ လစဉျကွေး၊ နှဈစဉျကွေးနဲ့ စိတျကွိုကျရှေးခယျြပွီးအသုံးပွုလို့ရသလို စိတျခရြမှုနဲ့ ပေးရတဲ့တနျဖိုး ယှဉျကွညျ့မယျဆိုရငျ အတျောကိုသကျသာတဲ့ အနအေထားမှာရှိပါတယျ။ Google Drive ကိုအသုံးပွုမယျဆိုရငျ 100 GB နဲ့ တဈလကို မွနျမာငှေ ၃ထောငျပဲကသြငျ့မှာဖွဈပါတယျ။ ( ဒျေါလာဈေးပျေါမူတညျပွီး အနညျးငယျပွောငျးလဲနိုငျ)
အခမဲ့(သို့) အခကွေးငှဖွေငျ့အသုံးပွုနိုငျမယျ့ အကောငျးဆုံး Cloud Storage Service မြား
Dropbox မှာ Data တှသေိမျးဆညျးဖို့အတှကျ အကောငျ့ဖှငျ့မယျဆိုရငျ 2GB အခမဲ့ပေးပါတယျ။ Mobile App တှလေညျးထုတျပေးထားတာဖွဈလို့ ဖုနျးပျေါက Data တှသေူငယျခငျြးကို Share ပေးဖို့အတှကျ Download လုပျပေးဖို့အကောငျးဆုံးထဲကတဈခုဖွဈပါတယျ။ Download ပွုလုပျရမယျ့ UI ကလညျးရိုးရှငျးပါတယျ။
ဒါကတော့ Dropbox မှာရရှိနိုငျတဲ့ Storage Plans တှပေဲဖွဈပါတယျ။
OneDrive ကတော့ Microsoft ကပိုငျဆိုငျပွီး Window Computer တှမှော Data Backup လုပျဖို့အတှကျအဓိကစီစဉျထားတာဖွဈပါတယျ။ User တဈယောကျစီတိုငျးအတှကျ Drive Storage 5GB အခမဲ့ပေးထားသလို ထပျပွီးပိုသုံးခငျြတယျဆိုရငျလညျး စိတျဝငျစားစရာ Package တှနေဲ့ဝယျယူနိုငျဦးမှာပါ။ Mobile App လညျးရှိပမေယျ့ Window OS အတှကျဦးစားပေးထားတာကွောငျ့ အသုံးပွုလို့ရတဲ့နယျပယျသိပျပွီးမတှငျကယျြသလိုရှိပါတယျ။
သူကတော့ Cloud Drive တှထေဲမှာ Free အမြားဆုံးပေးနိုငျတဲ့ Cloud Storage Provider တဈခုပါ။ Free အနနေဲ့ 50GB ပေးထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Bandwidth ကနျ့သတျခကျြကွောငျ့ File Size ကွီးကွီးတှေ Download ဆှဲရငျတော့အဆငျမပွပေါဘူး။ နောကျတဈခကျြကတော့ Download လုပျတဲ့အခါမှာ Internet Download Manager လို Downloader Software တှနေဲ့ဆှဲလို့မရပါဘူး။ MEGA ကထုတျပေးထားတဲ့ Software ကဆှဲတာ၊ ဒါမှမဟုတျ Browser ကနေ တိုကျရိုကျဆှဲတာ မြိုးပဲလုပျလို့ရပါတယျ။ MEGA ကိုတော့ ရရှေညျအသုံးပွုရမယျ့Files တှအေတှကျ အဓိကထားပွီးသုံးကွပါတယျ။
PCloud ကတော့ Dropbox နဲ့နညျးနညျးဆငျတူပါတယျ။ Smartphone User တှလေကျထကျမှာပိုအသုံးမြားလာပါတယျ။ Download ဆှဲရတာလှယျကူရိုးရှငျးပွီး Data တှသေိမျးဆညျးမြှဝဖေို့ Free အနနေဲ့ 20 GB ပေးထားပါတယျ။
ဒီ ကောငျလေးကတော့ကနြျောတို့အခဈြတျောလေးဆိုရငျလညျးမမှားဘူးထငျပါတယျ။ အစိမျးရောငျ Bar လေးပျေါမှာ Download ပွုလုပျရမယျ့ Size လေးကိုဖျောပွပေးထားပွီး Download Bandwidth ကလညျးအကနျ့အသတျမရှိ ခှငျ့ပွုပေးထားတာကွောငျ့ လိုငျးကောငျးရငျကောငျးသလို အမုနျးဆှဲလို့ရပါတယျ။ Data တှသေိမျးဆညျးမြှဝဖေို့အတှကျ Cloud Storage 10GB ကိုလညျး အခမဲ့ပေးထားပါသေးတယျ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ Personal Data တှပေဲဖွဈဖွဈ၊ လုပျငနျးသုံးအခကျြအလကျတှကေို သိမျးဖို့ပဲဖွဈဖွဈဆိုရငျတော့ Google Drive ဟာရှေးခယျြဖို့အသငျ့ဆုံး Cloud Storage ပဲဖွဈပါတယျ။
Google Drive ကို Google အကောငျ့တဈခု
ရှိတာနဲ့ အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေမှာ Google အကောငျ့ဆိုတာ ဖှငျ့ရအလှယျဆုံး၊ အပေါဆုံးနဲ့ လူတိုငျးအားလုံးနီးပါးရှိနတေဲ့ အကောငျ့တဈကောငျ့ပါ။ Google အကောငျ့တဈခုရှိတာနဲ့ Cloud Storage 15GB တဈသကျတာ အခမဲ့ရရှိထားပွီးဖွဈပါတယျ။
၂.တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျမယျ့ Software မြားပေါမြားခွငျး
GDrive ဟာ လူသုံးအမြားဆုံး Internet Search Engine ကွီးဖွဈတဲ့ Google ရဲ့ Service ခှဲတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ ခြိတျဆကျထားတဲ့ တခွား Software Plugin တှကေလညျးမြားပွားလှပါတယျ။ Google Chrome Extension အနနေဲ့သုံးရမှာဖွဈပွီး အသုံးပွုနိုငျမယျ့ Program တှကေိုတော့ ဒီနရောကနဝေငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
၃.မညျသညျ့ File အမြိုးအစားကိုမဆိုသိမျးဆညျးနိုငျခွငျး
Google Drive မှာ Digital Data တှကေို စိတျတိုငျးကသြိမျးဆညျးလို့ရပါသေးတယျ။
၄.Gmail ကတဆငျ့အလှယျတဈကူ Share နိုငျခွငျး
GDrive ထဲမှာရှိတဲ့အခကျြအလကျတှအေားလုံးကို Gmail ကတဈဆငျ့ အလှယျတဈကူ Share နိုငျတဈလို တဈယောကျခွငျးစီအတှကျလညျး Permission သီးသနျ့ထားပေးလို့ရပါသေးတယျ။
နရောမတူတဲ့ Co-Worker တှနေဲ့ Project တှတှေဲဖကျအလုပျလုပျတဲ့အခါမြိုးမှာ Document နဲ့ Folder တှေ File တှကေို အခြိနျနဲ့တပွေးညီ ပွုပွငျနိုငျပါတယျ။
Internet ကိုအသုံးပွုပွီး Data တှေ သိမျးတဲ့အခါ လုံခွုံရေးဆိုငျရာပွဿနာတှကေိုလညျး မဖွဈမနသေတိပွုရမှာပါ။ Google ကတော့ User တှရေဲ့အကောငျ့တှကေို အမွငျ့ဆုံး လုံခွုံရေးနညျးပညာတှအေသုံးပွုနိုငျအောငျစီစဉျပေးထားတာကွောငျ့ Google Account အခိုးမခံရသ၍တော့ Drive ပျေါက Data တှအေားလုံးလုံခွုံနဦေးမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ Drive ထဲမှာရှိတဲ့ Data တှအေတှကျလညျး Online Antivirus Scanner တှထေညျ့သှငျးပေးထားပါသေးတယျ။
၇. စမတျဖုနျးတှအေတှကျ လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ UI ကိုပံ့ပိုးပေးထားခွငျး
Android ပဲဖွဈဖွဈ iOS ပဲဖွဈဖွဈ Google Drive App ကိုအသုံးပွုတဲ့အခါ အတျောလေးလှယျကူရိုးရှငျးအောငျလုပျပေးထားပါတယျ။ သာမနျ File Manager တဈခုသုံးနရေသလိုခံစားရတဲ့အထိ ရိုးရှငျးပါတယျ။
၈.File Data မြားအလှယျတဈကူပွနျလညျရှာဖှနေိုငျခွငျး
Google Drive မှာ လိုအပျတဲ့ File တှကေို ပွနျလညျရှာဖှဖေို့အတှကျ Search Bar ကိုလညျးထညျ့သှငျးပေးထားပါသေးတယျ။ တဈလအတှငျး လုပျဆောငျခဲ့တဲ့ မှတျတမျးတှကေိုလညျးပွနျလညျကွညျ့ရှုနိုငျဦးမှာဖွဈပါတယျ။
၉.Music Streaming အဖွဈအသုံးပွုနိုငျခွငျး
အကယျ၍ GDrive မှာသီခငျြးလေးတှတေငျထားမယျဆိုရငျ Driveplayer.com ကနတေဈဆငျ့ ပွနျလညျနားထောငျနိုငျပါသေးတယျ။ Android ဖုနျးအတှကျလညျး CloudPlayer App နဲ့ကိုယျပိုငျ Music Streaming တဈခုအဖွဈ ဖနျတီးနိုငျပါသေးတယျ။ (CloudPlayer မှာ Drive Music Streaming ကိုအသုံးပွုဖို့အတှကျ Premium App ကို $7 နဲ့ဝယျယူရမှာပါ)
Google Drive ကပေးတဲ့ 15GB ကိုအသုံးပွုရတာမလောကျတော့ဘူးဆိုရငျ ဈေးသကျသကျသာသာနဲ့ Upgrade လုပျနိုငျတယျ။ လစဉျကွေး နှဈစဉျကွေး Plan ၂မြိုးရှေးခယျြနိုငျပွီး Upgrade လုပျနိုငျမယျ့ Storage တှကေတော့ 100 GB ၊ 1 TB ၊ 10 TB ၊ 20 TB နဲ့ 30 TB အထိရှေးယူနိုငျပါတယျ။ Storage Upgrade လုပျဖို့အတှကျတော့ Visa Card နဲ့ခြိတျဆကျထားဖို့လိုမှာဖွဈပွီး ပွထားတဲ့အဆငျ့တှအေတိုငျး အလှယျတဈကူဝယျယူနိုငျပါတယျ။
ဝယျယူမှုအစီအစဉျ ပွီးဆုံးသှားရငျတော့ အကောငျ့ထဲ ကို အခုလို Receipt လေးပေးလို့မှာဖွဈပါတယျ။ Plan ကို Unscribe မလုပျသေးသ၍တော့ လစဉျအလိုလြောကျ ကသြငျ့ငှကေိုဖွတျတောကျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အောကျမှာ Google Drive နဲ့ပတျသကျတဲ့ Storage Plan ကိုဖျောပွပေးထားပါတယျ။
Cloud Drive တှနေဲ့ပတျသကျတဲ့ အားသာခကျြတှကေိုသိရှိပွီးသှားပွီဆိုရငျတော့ Physical Storage တှအေစား ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့ Cloud Storage တဈခုခုကို ရှေးခယျြနိုငျကွမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။ မိတျဆှတေို့ သိပွီးအသုံးပွုနတေဲ့ Cloud Storage ကောငျးတာလေးတှရှေိရငျလညျး ဝမြှေဆှေးနှေးပေးသှားဖို့ ဖိတျချေါပါတယျ။ နောငျအလဉျြးသငျ့တဲ့ အခါ Cloud Storage Type တှအေကွောငျးဆကျလကျဖျောပွပေးသှားပါဦးမယျ။
by 2B .4hours ago